I-Villa Private Pool Garden enhle kakhulu
I-i-bungalow ephelele ibungazwe ngu-Lesley And Alan
Isanda kutholakala kusukela ngo-Oct'20, njengoba indawo yokungcebeleka isivulwe kabusha ngokugunyazwa okusemthethweni kokuthi ‘Ihlanzekile Futhi Iphephile’.
Eduze namabhishi, izifundo zegalofu, amapaki Amanzi kanye neziqiwi zeMvelo, leli chibi elingasese elinamakamelo ama-3 libekwe ezingadini ezivuthiwe endaweni yokuphumula esezingeni eliphansi. Kunokukhethwa okubanzi kwezindawo zokudlela eziseduze, kanye nezinye eziningi edolobhaneni (1.2km).
9m x 4.5m ichibi elinezitebhisi - ukujula 1.1m > 2.1m. Ifanele izingane nezinsana. Amathafa amabili amboziwe, i-BBQ. Igumbi lokuphumula / lokudlela eline-Samsung Smart TV, i-Apple TV, i-Astra 1 ne-Intelsat 907, isidlali seDVD, kanye nedokodo le-Philips iPod/iPhone. Ikhishi lanamuhla elihlome ngokuphelele. Inkosi (160cm) Igumbi lokulala elikhulu eliphindwe kabili + igumbi lokugezela le-en suite; amanye amakamelo amabili okulala + igumbi lokugezela lomndeni. I-air conditioning kuwo wonke amagumbi okulala, acwebezelwe kabili kulo lonke. I-Roof Terrace enokubukwa kolwandle ngokwengxenye. I-driveway enkulu enesango. I-Wifi ezinikele yamahhala. Ukuvakasha kokugcinwa kwendlu ngamathawula amasha kabili ngesonto, nelineni lokulala masonto onke (ukuhlala isikhathi eside). Ichibi lenziwa isevisi kabili ngesonto ehlobo, futhi ingadi inakekelwa ~ masonto onke.
I-TV ene- I-Netflix, ikhebula ye-premium, I-Amazon Prime Video, Apple TV
Siyabuthanda ubungane nokungenisa izihambi kwabantu bendawo, indawo enokuthula nezinhlobonhlobo zezindawo zokungcebeleka eziseduze.
Ibungazwe ngu-Lesley And Alan
Amanani ethu ehlobo awesizini, afinyelela umkhawulokudonsa ongu-€285 ngoJulayi nango-Agasti, futhi akuxoxiswana ngawo.
Sicela usithinte ukuze uthole izaphulelo ngenani elingu-€84 lokubhukha kwasebusika (November kuya ku-March, ubusuku obuyi-9 noma ngaphezulu), noma ukuze nixoxe ngoKhisimusi/Ngonyaka Omusha.
Sicela usithinte ukuze uthole izaphulelo ngenani elingu-…
Inombolo yepholisi: 8991/AL